Indlu yefama yenkulungwane ye-17 kwintliziyo eluhlaza yase-Itali
Indlu yasefama yaseLaurenzi yi-oasis yeehektare ezi-6 apho amaqela abahlobo okanye iintsapho zinokuphumla kwaye zonwabele ubuhle be-Umbria. Iyonwabela indawo ebalaseleyo yokuba ziikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwiPaki yeSizwe yaseSibillini, imilambo yaseVigi kunye neNera, apho kunokwenzeka ukuba ulobe kwaye uzilolonge ezemidlalo ngamaxesha athile onyaka, ukusuka kwi-"Bagni di Triponzo" kwiindawo ze-sulphurous water spas kunye nemizuzu engama-25 ukusuka eRasiglia. Iivenkile, ii-ATM, iivenkile ezinkulu, iibhari kunye neendawo zokutyela ziphakathi kwe-4km. Abahlobo abanoboya bamkelekile!
Umongo wokuqala wendlu yasefama yinqaba yamatye eyaqala ngenkulungwane ye-17, ngoku enamagumbi amabini okulala amathathu endlu, kunye nelinye lamagumbi okuhlambela amabini. Ngokuhamba kwexesha, isitali, iholo yangoku, kwaye ke indlu yokwenyani yomfama yongezwe kwi-turret, ngoku iguqulwe ibe yindawo yokulala enkulu, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela elongezelelweyo. Le ndlu ineendawo zokungena ezininzi zangaphandle, indawo yokupaka egqunyiweyo kunye nezinye ezininzi ezingagqunywanga, igumbi elincinane lokuhlala langaphandle elineoveni ebaswa ngamaplanga, kunye nomthombo / indlu yokuhlambela, esawugcina umkhombe wamandulo wokusela izilwanyana.
Indlu yasefama imi kumbindi wepropathi emalunga neehektare ezi-6, eqhagamshelwe kwindlela karhulumente ngendlela enyukayo, iyindlu yasefama esentabeni. Abamelwane nabo bangabanini beminye imihlaba nezindlu, kodwa umgama osuka kwezinye izindlu ufana nokukuvumela ukuba ube nemfihlo enkulu. Kufuphi, malunga ne-4km, uya kufumana iilali ezinomtsalane zokuqala, ezinje ngeCerreto di Spoleto kunye neBorgo Cerreto, ezineevenkile ezinkulu, iposi, i-ATM, ibhanki, ugqirha, ikhemesti kunye nezinye iinkonzo.
Mna, Ilaria, andiyi kuba khona ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa ndiya kulawula naluphi na unxibelelwano nawe ngaphambi kokufika kwakho, ndikushiye ukususela ngaloo mzuzu ekunyamekeleni kwabazali bam, abaya kukwazi ukukunceda xa kuyimfuneko. Bakumfanekiso weprofayile kunye nam! Iinombolo zabo zomnxeba ziya kubonelelwa kuwe ngexesha lokuqinisekiswa kokubhukisha, ngoko ke ukuba kukho imfuneko ungathandabuzi ukuqhagamshelana nabo kwaye uqhagamshelane nam, oya kuhlala unaye nangayiphi na imeko.
Mna, Ilaria, andiyi kuba khona ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa ndiya kulawula naluphi na unxibelelwano nawe ngaphambi kokufika kwakho, ndikushiye ukususela ngaloo mzuzu ekunyameke…
Inombolo yomthetho: 054010LOTUR30546